Ciidamada Badda Soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegay xuska sanadguurada 51-aad ee aasaaskooda
Munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo loogu dabaal dagayay sanadguuradii 51-aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay Ciidamada Badda Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, ayadoona ay munaasabadda ka soo qaybgaleen wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo saraakiisha qaybaha ciidanka.
Munaasabadda ayey ciidanmada badda ku soo bandhigeen dhoolatusyo isugu jiray gaadda ka ciyaar iyo doonyo dheereeya oo uu ku rakiban yahay hub, kuwaasoo muujinayey xirfaddooda ciidan iyo sida ay diyaarka ugu yihiin in ay difaacaan xeebaha dalkooda.
Taliyaha ciidanka badda Soomaaliyeed Admiral Gaas Faarax Axmed Cumar (Faarax Qare) oo munaasabadda hadal ka jeediyey ayaa ku nuuxnuuxsaday taariikhda ciidanka iyo heerarkii kala duwanaa ee ay soo mareen, taliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in ciidanku ay ku soo shaqeeyeen duruufo aad adag muddadii 5-ta sano ahayd ee la soo dhaafay, hase ahaatee maanta ay yihiin ciidan laysku halleyn karo, balse u baahan qalabeyn lagu sameeyo.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya mudane Cabdixakiim Maxamud Xaaji Fiqi oo asagana munaasabadda hadal ka jeediyey ayaa taliyaha iyo ciidanka baddaba ugu hambalyeeyey xuska sanadguurada 51-aad ee ka soo wareegtay aasaaskooda.
Mudane Cabdixakiim ayaa waxa uu intaa raaciyey in xalka keliya ee looga gudbi karo dhibaatooyinka burca-badeeda uu yahay ayadoo la helo ciidamo badeed oo ay Soomaaliya leedahay oo leh tababarro wanaagsan iyo qalab casri ah oo ay ku howlgalaan.
Sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay taliyaha booliska Soomaaliyeed sarreeye Gaas Shariif Sheekhunaa Maye, abaanduulaha ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed Sarreeye Gaas Cabdikariim Yuusuf Aadan (Dhaga-badan) iyo mas'uuliyiin kale, kuwaasoo dhammaantood Ciidamada Badda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyey munaasabadda qaaliga ah ee ay u dabaaldegayaan.